Dumaaye news, adado, Chicago, IL (2022)
Page-kaan waxaa ka heleysaa warbixino degdeg a, riwaayado, Barnaamijyo diiniya iyo Falaqeynta Ciyaar
Afduubkii Al Shabab ku soo if baxeen iyo afduubka maanta Framaajo isticmaalayo maxaa isku mid ka dhigay.
Bilowgii 2006 kii, Khawaarijta Shabab ayaa sabab u ahaa in ay isku dhacaan dowladii Baydhabo joogtey iyo Maxk**adahii Islaamiga ahaa. Khawaarijta sida Cayrow iyo Godane waxay si hoose u laayeen dadkii lacagta ,aqoonta, siyaasada, iyo waayo aratiniamda dowladnimo ku taageerijiray maxk**adaha islaamiga ahaa. Agduubkkaas ayaa saab u ahaa in ciidanka Ethiopia ay xoog ku yimaaaan Muqdisho markii ugu h**eesay taariikhda Somalida. Hadaba Framaajo waxaa uu isticmaalayaa Afduub la mid ah kii ay isticmaaleen Khawaarijta.
Farmaajo waxaa uu xoog iyo xeelad isugu geeynayaa in aysan doorsho dhicin ilaa laga gaarayo waqti dunidu go aansato in la dhaho Somalia dowlad k**a jirto oo bank aduunka iyo dhamaan dadka Somalia ka caawiya dowladnimad isaga huleeaaleen wadanka laguna noqdo dolwlad ku meel gaar ah. Afduubkaas waxaa u sahlaya koox qabiilkiis ah oo afduub u haysta doorasha 16 ka kursi ee gobalka Gado. Dilalka siyaasadeed oo dalka ka dhacaya oo lugaha laga galaya faramaajo. koox siyaasiyiin ah oo dadkoodii naceen oo ogsoona hadii dowlad lahelo ay qashinka ka aruurinyaan wadoonyinka. Laakin Farmaamjo waxaan ka maqan xikmadaha ah Balaayo waxay ku fiicantahay inta ay xir xiranthay hadii ay fur furtana meel ay ku dhamaandoonta cidina ma saadaalinkarto
Xikmadaas waxaa si fiican u fahamay dadk Reer Muqdisho
Somaliland Siyaasiyiinteedu waxay lacag siiyeen koox la dagaalamaysa diinta Islamka.
Heritage foundation waa koox visha u soo saarta dadka la kulmaya siyaasiyiinta markeykanah ah isdoo kale u ole oleeya danahooda, lacag badana ka qaataan, lacagtaasna waxay ay siyaan Cogresska si loogu soo doorto marlaad , xiligaan oo lagu jiro waqti doorasho oom,loogu yeero (midterm election). Marka Siyasiyiinta Somalaind dadkoodii Abaarta darteed qaajo u oon-n u le enaya, ayey lacag ku siinayaan dad hadafkoodu yahay ladgaalanka diinta islaamka.
Marka aad aqriso scholarly article ay qoreen waxaad ka dheehan karataa sida ay ula dagaalmayaan islaamka iyo wax uu taaganyhay. Sida ay ku qoreen this article America’s Founding Principles waxaay ku sheegeen in shareecada islaamku aysan la jaan qaadi Karin christam iyo yahuuda, sidaan ayay y qoreen “ the challenge of Sharīca law to the rule of law; of the role of women to equality before the law; of alleged “defamation of religion” to religious liberty, freedom of speech, and academic freedom” Hadaba siyaasiyiinta Somaliland iyagoo ogsoon wax ay nimankaani u taganyihiin ayay bixiyeen lacag diinta islaamka lagu mucaarado. War ilaahey u toobadkeena. Waxay waydiinyaa dadka Somaliland raali miyaad ka tihiin in diinta islaamka lagula dagaalamo lcagtiina?
Baryahaan waxaa baraha bulshada qabsaday qoys Somliyeed oo u soo guuray Somalia, sharcigii wadanka ay ku joogeena iska celieyey si caruurtoooda ay u baraan diinata Islamka. Aan is wadiinee caruurta waalidkood qurbaha diinta ku baray iyo kuwa Somalia lagu baro kuwee caqiido ahaan Imaan ahaan dhisan?
Caruurta Somalia joogta diintu waxay u tahay dhaqan, laakin kuwa qurbaha waxay u tahay caqiido iyo iiman dhab ah. Tusaale caruurta Somaliyeed ee qurbaha ku nool diintu waxay u tahay caqiido uma han dhaqan maxaa yeelay, waxay hasytaan dhanqakii somalida . Sidaasi darteed waxaa la baranaa diinta iyo macaanideeda. Marakii suurad la baro waxaa la baraaa macnaheeda markii la baro xadiis waxaa la baraa mecnihiisa. Marka waa caruur caqiido ahaan u dhisan, isnaani ahaan u dhisan. Cunugii ilaahay hanuuniyo waxaa uu noqdaa mid waxtara dadka Somaliyeed iyo dadka kale aan muslimiinta aheen. Maxaa yeelay waxaaa ugu yeeraa diinta dadka kale Qofkasta marka uu wanaagiisa arko ayuu yiraaa diinteed aaminsatahay sidaana waxaa diinta ku soo gala kumanaan iyo kumanaan qof.
Ninaca kale kuwa Somalia jooga waxaa la baraa qur aan ka kaliya lama baro micnihiisa. waxaad maqalaysaa hebel quraanka ayuu dhameeyey laakin ma yaqaano micnihiisa marka qur aankaas waxba uma taraayo maadama uusan micnihiisa aqoon. Sidoo kale in ay diintu dhaqan noo tahay oo aysan inoo aheen caqiido waxaa daliil u ah (Salaada) masaajida ayaa laga buuxaa marka laga soo baxo dadku waxay h**e ka bilaabyaan dulmigii cabsi ilaahey iyo caqiido midna dadka kuma jirto. Si kale hadii aan u iraahdo koobka shaaha ah sida uu inoo qabto ayay salaadu inoo qabataa marka waa dhaqankeena laakin maahan caqiidadeena. Waxaad arakeysaaa dad dagaal ku jira oo qof kale oo muslim ah dagaal kula jira dhahaya waan soo tukanyaa ee qoriga ii qabo taasi waxay cadeen u tahay in Somalidu diintu ay dhaqan u tahay oo aysan caqiido u aheen. Maxaa yeelay caqiidada iyo cilmigu waxyaabo badan ayuu adanaha ka reebaa laakin dhaqanku k**a reebo.
Dhaqanka iyo diinta Ayaan la isku qaldin
Madaxweyene Farmaajo ama danbiga qiro ama natusi cadeen muujinaysa in gabdhu Qatar ku aheed amaanka wadanka oo sidaaa loo khaarijiyey,ama sidoo kale natusi cadeemo muujinya in lacag lagu bixyey si Shabab looga iibiyo.
Hadii qabadhu Qatar ku aheed amaanka iyo sirta dalka natusi cadeemo muujinyaa in ay cadow shisheeye u shaqeeynaysay sidaana loo qaarijyey ama lagu xidhay. Cida ay la shaqeennaysay xogta ay gubinaysay soo gudbi. Hadii gabadha NISA lacag siisatay oo Shabab lacag looga qaadatey oo dad ka tirsan NISA sidaa sameeeyen soo gubi oo haku hagoogan danbigooda.
Waxaan ogsoonahay in aad maanta xog buuxa hesho jagada aad hayso darteed ay ka sahlantahay in aad koob casiriye ah cabto. Kaliya waxaad waci kartaaa GOOGLE ,APPLE , SUMSUNG,Facebook,oo dhamaantood ku siikara xogat aad u baahan tahay hal daqiiqo gudahoood, maadama dadka kuu shaqeeya inta badan isticmaalaan shirkadahaan. Sadaan ogsoonahay shirkdahaan boqolkiiba boqol waa kaydiyaan xogata.
Hadii aadan sidaasi sameen Mudane Farmaajo waaan soo marnay wadadaan dib danbena ugu laaban mayno. 1980 yadii dadka inta la iska qaato ayaa lagu leen jiray Jasiira cid ka hadli jirtayna ma jirin taas waxay sabab u noqtey in dowladii Somalia bur burto oo aan halka maanta joogo nagaarsiissy, sidasi darteed dib u laaban mayno k**a aamusayno dilka IKRAAN oo dilka IKraan waa dilka dadka Muqdisho oo dhan maxaa wacay , waxaan wakil ka nahay shacabka Somaliyeed oo dhan. Mana dooneyno in dowlada Somalia bu burto ,marka hadii aad na tusi waydo cadeemo muujinyaa halka ay ku danbeeysa Ikraan waxaan garab iyo hiil u noqoneynaaa Wasiirka koowaad iyo kooxdiisa kuna qasbaynaa gobolada in la xoojiyo doorasha baarlamaank si meesha lagaag saaro xoog iyo xeeladba maxaa yeelay dulmi dooni mayno,
Aniza Yusuf Nuux oo ah ardayad dhigata Iskuulka Abaarso ayaa Sidaan Qortay -:
" Waxaan doonayaa inaan xaqiiqada uga cadeeyo inta aan ka ogahay iskuulkayga arimaha la isla dhexmarayay waayadan, waa ay jiraan wax badana waa la buun buuniyey anaga nalama baro diin masiixi oo toos ah lakiin ilahay baan run jecele waqtigayaga badankiis wuxuu ku idlaadaa dhaqan fogeyn iyo fadaranimo hablaha qaybtood lagu dhiirigeliyo
Gaaleysiin maxay kaga duwan tahay marka inta nala loo keeno niman gaalo ah oo qaybtood cadaan tahay nala dhaho hablaha kaalaya sawiro lagala la dalxiisa idinkoo weliba madax qaawan oo cawradiinu banaanka taalo haa waa wax dhaca mar walba oo fasaxyada u badan
Sidoo kale kawarama miyeyna diin iyo dhaqan fogeen ahayn marka maalin walba macalimiinti ku wacdinayaan hablo yaryar inay qaataan cinjirka galmada si ayna uur u qaadin lacalla hadey doontaan rabitaan jinsi, waxaa iskuulkeena qayb kamid ah Maqsinada ka buuxa cinjirada galmada iyo Kiniino ah kuwa family planiing ka dhamaantood hablaha yaryar si bilash ah aya lagu siiya
Hablaha intooda badan waxa fursad loo siiyaa iney raggay rabaan u yeeran karaan maalmaha qaar meshay raban la aadi karaan, walaahi bilaahi waa dhacda in macalimiinta ajnabiga ah ee haweenka ah qaarkood hablaha ku dhahaan hadeydaan Rag saaxiibo aas tihiin haysan ama eydan kahelin Idinka dhexdiina wehel iska dhigta baahidiina dhameesan kara
Waxaan wax qarsoon ahayn in hablo badan maanta labo labo saaxiib u yihiin ayagoo si isku mid ah isku isticmaala, waa arin caan ah , waana arin arday badano ogtahay in hablo badan dhaqankoodii iyo diintoodii la fogeeyey maxaan u qarsanaynaa dhaqankaan maxaan u difaaceyna haa qofkii qariya ama dafira raali buu ka yahay, wixii rabbi igu ogaa oo run ah baan idiinka jaahil saaray , waa Mahadsantihiin guud ahaantiin "..
Share/ La wadaag bulshada si dadbadan wax uga Ogaadaan arimahaan.
FARIIN KU SOCOTA GABADHAA,
Tani waa dagaal kale oo lagu soo qaaday dhaqanka iyo diinta uma Somaliyeed.
Kadib markii dadka Somaliyeed u qaxeen qurbaha oo la ogaaday sida ay diinta ugu dhaganyhihiin, waxaa bilowday dagaal lagu soo qaday dadka somaliyeed sidii wadadaa looga leexinlahaa. Markaa waxaa la isku dayey in naloo sameeyo dhaqan aan diinta aheen. Ugu h**een waxaa bilowaday dagaal lagu aflagaadeynayo jalbaabka gabdhaha Somaliyeed, oo yaawada dagaalkaas Somali kale. tusaale waxaay ku qoreen buugaag iyo joornaalo gabdhaha jalbaabka qaata looga bixinaayo sharaxaad qaladan . Tusaale waxay dhaheen marka ay qoraxdu kululaato gabdhaha waa lagu qasbaa xirashada jalbaabka oo waxaa ku qasaba ninkooda ama qoyskoodaa hadii ay diidaan waxaa loogu hanjabaa in laga saarayo qoyska iyo waxii la mida ah.
Gabdhaha Somaliyeed markii ay arkeen qoraalada laga sameeyey , qaasatan qaybtooda aqoonyahanada ah waxay bilaabeen in ay xayeesiyaan jalbaabka. In jully 1994, heer kulka New York city aad ayuu u kululaa cimiladu waxa aheed mid sideey ahaan jirtay ka kulul, gabar ka mida gabdhah Somaliyee ayaa soo xiratey Jalbaab, dadkii ayaa la yaabay waxaa lagu yiri kuleel ma dareemaysid miyaa waxay ugu jawabtey hadal taarikha galay.Waxay tidhi hadii aanan maanta u adkeysan kuleelka side jirkeygu ugu adkeysanyaa naarta marka aan dhinto. Taasi waxay badashay malaayiin muslmiin marakeykan ah kuwaas oo bilaabayna in ay xirtaan qamaar ama ugu yaraaan asturaan jirkooda.
Hadaba gabdha maanta Social media ka sheegtay hadii wiilku gabadhiisa ka qaato qanciye waa xooga waa dagaal kale oo lagu sooo qaaday dhaqankeena, iyo diinteena.
Probability ahaan waa wax dhici kara laakin boqolkiiba waa meeqo ayay dhicikraan. Mase dhici kartaa in wiil maskixiyan u miyir qaba in uu gabadhiisa xoog uga qaato qanciye, xitaa haduu ka qaato maka helayaa dareenkii uu raadinaayey? As xaasle ahaan and oday Somaliyeed ahaan waxaan xaqiijinyaa in uusan jirin wax dareen ah oo uu helaayo taasina waa runta biyo k**a dhibcaan ka ah. Maxaa wacay hadalka sida xanaaqa la isku dhaafsaday dartiis ayaa dareerka ka qaadaya raga, and that is human nature. Waxaan ka hadalyaa waa wiilka aan drug isticmallin anigu ma ogi wiilka drug isticmaala. Hadii marka doodaadu tahay wiilka drug isticmaala hade taasi tusaale loogu ma soo qaadan karo raga Somaliyeed. Sidaasi darteed, waxaan kula talin lahaa gabdhaas inta aysan hadalka dhihin in ay baaritaan sameeyso wax dhici kara iyo waxaan dhici karin, will diin leh oo miyirkiisu oo joogo oo hadana Somali ah uma maylnayo in uu gabadhiisa xooga uga qaadanayo qanciye. Hadalada noocaas oo kale ah waxay dhaawacaysaa fayaqabka qoyska Somaliyeed maadaama aad luuqada somaliga fariinta ku dirayso.
Be the first to know and let us send you an email when Dumaaye news posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
Send a message to Dumaaye news:
Cabdi raxman cabdi shakur
Midowga musharaxiinta oo qabanaya shir jaraaid
Mid ka mida taageerayaasha Sharmaajo oo hadlay
La MegaTop Radio
Thunder Roar Music Group